Zimbabwe Embassy and Consulate information
Zimbabwe Embassy and Consulate information provided by Passports and Visas.com
We are a nationally recognized US Passport and visa service by the Washington Post, New York Times and USA Today. Our team has been getting passports and visas for travelers (such as to Zimbabwe) for over 15 years.
We'd appreciate the opportunity to assist you in obtaining a Zimbabwe visa.
Find out if you need a Visa for your trip to Zimbabwe?
Contact Dr. Machivenyika Mapuranga - Ambassador
Phone +1 2129809511